कुलमानको समर्थनमा राँके जुलुस ! – नेपाली सूर्य
September 17, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on कुलमानको समर्थनमा राँके जुलुस !
काठमाडौँ – कुलमानको समर्थनमा बुधबार राति राजधानीमा मसाल जुलुस निकालिएको छ। चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि बिदा भएका कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि नियुक्त गर्न माग गर्दै अनामनगरमा मसाल जुलुस निकालिएको हो।
सिंहदरबारको पुर्बी गेट अनामनगरमा कुलमान घिसिङको समर्थनमा राँके जुलुस हण्ड्रेडस ग्रुपका युवाहरुले निकालेका हुन्। उक्त ग्रुप विभिन्न सामाजिक कार्यमा समेत सक्रिय रहँदै आएको छ।
कुलमानको समर्थनमा दिउँसो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न खोज्दा प्रहरीबाट धरपकड भएपछि मसाल जुलुस निकालिएको हण्ड्रेडस ग्रुपले जनाएको छ।
बुधबार कुलमान घिसिङको पक्षमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको छन्। काठमाडौंको माइतीघरमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यसक्रममा प्रहरीले केहिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो भने पानीको फोहोरा समेत हानेको थियो।
photos from I’M Proud To Be A Newar facebook page
बुधबार नै कुलमानको समर्थनमा जोरपाटी र बालाजुमा पनि प्रदर्शन भएको थियो। बालाजु माछापोखरी र जोरपाटीमा जम्मा भएका नागरिकहरुले कुलमान घिसिङको समर्थनमा चर्को नाराबजी गरेका थिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल आइतबारबाट सकिएको छ। चार वर्ष अगाडी भदौ २९ गतेका दिन कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्ति पाएका उनको कार्यकाल सकिएको हो। बिगुलन्युजबाट
*photos from I’M Proud To Be A Newar facebook page
दुखद खबरः कुवेतमा नेपाली युवककाे सुतिरहेकै अवस्थामा निधन
January 20, 2022 January 20, 2022 Nepali Surya
बामदेव जता राष्ट्रिय सभामा उसैको बहुमत
January 6, 2022 Nepali Surya